Iindaba-Iingcebiso zokutsheva kwabasetyhini
1 iBlade yaBantu
2 Blade yaBantu
I-3 Blade yaBantu
4 Blade yaBantu
I-5 Blade yaBantu
I-6 Blade yaBantu
1 iBlade yaBasetyhini
I-2 blade yaBasetyhini
I-3 Blade yaBasetyhini
I-4 Blade yaBasetyhini
I-5 Blade yaBasetyhini
UMBINI WENDLU EBINI
Iingcebiso zokucheba kwabasetyhini
Xa ucheba imilenze, ikhwapha okanye indawo yeebikini, ukuthambisa amafutha ngendlela efanelekileyo linyathelo lokuqala elibalulekileyo. Ungaze uchebe ungakhange uthambise iinwele ezomileyo ngamanzi, njengoko iinwele ezomileyo kunzima ukuzisika kwaye uzophule umda omhle wencakuba. Ibhleyidi ebukhali ibalulekile ukuze ushefe ngokusondeleyo, ukhululekile, ngaphandle kokucaphuka. Isitshetshe esikrwelekayo okanye esitsalayo sidinga ikhaba elitsha kwangoko.
1.Lungisa isikhumba ngamanzi kangangemizuzu emithathu, emva koko uthambise ijel yokutsheva. Amanzi ayanyibilikisa iinwele, zisenza lula ukusika, kwaye ijel yokucheba inceda ukugcina ukufuma.
Sebenzisa ixesha elide, nokuba ubetha ngaphandle kokufaka uxinzelelo olugqithisileyo. Cheba ngononophelo ngaphezulu kweendawo ezinamathambo ezinje ngamaqatha, iinsimbi kunye namadolo.
3.Amadolo, agobe kancinci ukutsala ulusu luqinile ngaphambi kokucheba, njengoko ulusu olusongiweyo kunzima ukulucheba.
4.Hlala ufudumele ukunqanda amaqhuqhuva erhasi, nanjengoko nakuphi na ukungalungelelani kumphezulu wolusu kunokuba nzima ukucheba.
Iincakuba ezi-5 ezijijelwe ngocingo, ezinjengezo zenziwe nguSchick® okanye iWilkinson Sword, zinceda ukunqanda ukungakhathali nokusika. Sukucinezela kakhulu! Vumela ikhaba kunye nesiphatho sikwenzele umsebenzi
6.Khumbula ukucheba kwicala lokukhula kweenwele. Thatha ixesha lakho kwaye uchebe ngononophelo kwiindawo ezibuthathaka. Ukucheba okusondeleyo, sheva ngononophelo ngokuchasene nokukhula kweenwele.
Ulusu lwe-1.Moisten kwaye ufake ijel eshinyeneyo.
2.Phakamisa ingalo yakho ngelixa utsheva ukutsala ulusu.
3.Yicheba ukusuka ezantsi phezulu, ivumela ukuba i-razor iwele ngaphezulu kolusu.
4.Vimbela ukucheba indawo enye ngaphezulu kwesinye, ukunciphisa ukucaphuka kolusu.
Iincakuba ezi-5 ezijijelwe ngocingo, ezinjengezo zenziwe nguSchick® okanye iWilkinson Sword, zinceda ukunqanda ukungakhathali nokusika. Sukucinezela kakhulu! Vumela ikhaba kunye nesiphatho sikwenzele umsebenzi.
6. Kuphephe ukusebenzisa izinto zokuthambisa okanye zokuthintela ukoyiswa ngoko nangoko emva kokucheba, kuba ukwenza njalo kunokubangela ukucaphuka nokuhlaba. Ukuthintela oku, cheba izikhwapha ebusuku kwaye unike indawo ixesha lokuzinza ngaphambi kokusebenzisa isisiyobisi.
Iinwele ze-1.Moisten imizuzu emithathu ngamanzi emva koko uthambise ijel yokucheba. Olu lungiselelo luyimfuneko, njengoko iinwele kwindawo yeebikini zithanda ukujiya, ukujiya kunye nokuhambisa, kusenza kube nzima ukusika.
2.Phatha ulusu kwindawo yebhikini ngobunono, njengoko ibhityile kwaye ithambile.
3.Yicheba ngokuthe tye, ukusuka ngaphandle uye ngaphakathi kwethanga elingaphezulu kunye nendawo ye-groin, usebenzisa imivumbo egudileyo.
4.Yicheba rhoqo unyaka wonke ukugcina indawo ingenazinwele nezinwele zangaphakathi.
Imisebenzi yasemva kokucheba: Nika ulusu lwakho imizuzu engama-30 ukuba uyeke
Ulusu lolona lubuthathaka ngokukhawuleza emva kokucheba. Ukuthintela ukudumba, masiphumle ulusu ubuncinci imizuzu engama-30 ngaphambili:
1. Ukufaka into yokuthambisa, ukuthambisa okanye amayeza. Ukuba kufuneka uthambise ngoko nangoko emva kokutsheva, khetha ifomula yekhrimu endaweni yokuthambisa, kwaye kuthintele ukukhupha izithambisi ezinokuba nealpha hydroxy acids.
2. Ukuqubha. Ulusu olusandul 'ukuchetywa lusengozini yeziphumo zokuhlaba zeklorine kunye namanzi anetyuwa, kunye neelostan sunscreens kunye nothango lwelanga oluqulathe utywala.
Ixesha Post: Nov-13-2020
Akukho 77 ChangYang Road, JiangBei District, Ningbo, China